रहरै रहरले गायिका बनिएछ, तर धेरै कुरा सिक्न बांकी छ – किसु गुरुङ | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७६ फाल्गुन २१ गते ०९:४५
गायिका - किसु गुरुङ
घर छोडेर परदेश आईसकेपछि विदेशमा आउनु को अर्थ सार्थक बनाउन काम गर्नै पर्यो दैनिक ड्युटी गर्छु । फुर्सदको समयमा गीत संगीत गाउने लेख्ने काम गर्छु।
गीत संगीतको यात्रा कसरी सुरु भयो ?
मलाई लाग्थ्यो गीत संगित गायक गायिकाले मात्रै गाउछ, तर होइन रहेछ धेरै मान्छेहरुले गाएको देखे सुने सो गीत संगीत भनेको के रहेछ ? भनेर मैले पनि गीत संगीतको अनुभव बटुलेर हेर्छु भनेर मैले कभर गीतबाट यात्राको सुरुवात गरे । जब म इजरायल आए यता धेरै कार्यक्रमहरुमा गीत गाउने अवसर पाईयो । यसरी नै गीत संगीतमा रहरै रहरले लागियो । अहिले त पेशा जस्तै भईसक्यो ।
तपाई गायिका बन्नुको प्रेरणा कसलाई दिनुहुन्छ ?
म आफुले आफुलाई गायिका नै हो भन्न त रुचाउदिन किन कि गायिकामा हुनु पर्ने कुराहरु सिक्न धेरै बाकी छ । तर पनि यो स्थान सम्म आईपुग्दा मलाई दर्शक श्रोताहरुले गायिकाको उपनाम दिनु भएको छ । यसको लागि आम दर्शकश्रोतालाई नै पहिलो प्रेरणा जान्छ । त्यस्तै, रबि लामा र रमेश युडिबाट धेरै कुरा सिकेको छु र मेरो पहिलो आवाज भर्ने संगीत पनि रबि लामा र रमेश युडि उहाँहरुबाटै पाएकी हुँ, त्यसैले यो प्रेरणा उहाहरुलाई नै दिन चाहान्छु ।
हाल सम्म के कस्ता कतिवटा गीत गाउनु भएको छ ?
हाल सम्म मैले २३ वटा गीतहरुमा आवाज भरी सकेकी छु । जस्मा आधुनिक, लोक आधुनिक, लोक पुर्बेली, लोक पस्चिमेली , डान्सिङ जस्ता गीतहरु रहेका छन ।
तपाईले गाउनु भएका तथा लेख्नु भएका गीत कुन कुन हुन ?
मैले गाएका गीतहरुमा मै राम्री, जाले रुमाल, सोल्टिनी ज्यु, सात समुन्द्र पारी, सोलु सल्लेरी, डेटिङ तिर, मलाई गोरि नभन, , तिमि हास , तिमिलाई पाए, छोरीको जन्म , हिस्सी परेको, मायाको चिनो , पर्देशी, लकैमा फुल्यो, ऐसेलु पाके रहेका छन । त्यस्तै, सुनैको शिरफुल, लचक लचक, भिजा लाग्यो, पूर्ब झापा, खोटो सल्लाको , सोह्र बर्षे आदी रहेका छन । जस मध्ये पूर्ब झापा र लचक लचक भन्ने गीतको शब्द चाही मैले आफैले लेखेकी हुँ ।
पारिवारीक साँथ सहयोग कस्तो छ ?
मेरो पारिवारिक साथ सपोर्ट एक दमै राम्रो छ किन कि मेरो श्रीमानले पनि गीत संगीत लाई अति नै मन पराउनु हुन्छ । हामी दूर्इ जनाले एउटा गीत पनि गाएका छौ जुन गीत रहेको छ ‘खोटो सल्लाको’ जसको शब्द – संगीत र एरेन्ज भने गायक तथा संगीतकार बिशाल बानु राईले गर्नु भएको छ ।
प्रवाशमा बसेर नेपाललाई कसरि सम्झनु हुन्छ ?
मातृभुमि के रहेछ भनेर बुझ्नलाई परदशी हुनु नै रहेछ, नेपालमा हुँदा खासै महत्व नलाग्ने ति पाखा पखेरा, भाष, भेषभुषा गाँउ घर परदेशी भएपछि झल झल सम्झिन मन लाग्छ । त्यस्तै, आफ्नो देश आफ्नो जन्मभुमि हरेको कुराको कति सम्झना आउछ भनेर शब्दमा व्यक्त गर्नै सकिदैन । अर्को कुरा परिवारबाट टाढा भए पछि आफ्नो बुबा–आमाको याद त हर समय आई नै रहन्छ ।
प्रवाशको बसाईले गीत संगीतको यात्रामा केहि असर पर्दो रहेछ की ?
एकदमै धेरै असर पर्छ । किनभने हामी चाहेर पनि पब्लिक मिडिया सामु आउन पाएका हुदैनौ । रेकर्डिङ गर्न जाने समय मिल्दैन गीत संगीतलाई समय दिन सकिरहेका हुदैनौं हेरेक कुराहरुले असर पारेको हुन्छ ।
ईजरायलको बसाई तथा दैनिकी कसरि व्यतित हुने गर्दछ ?
त्यहिँ त हो, आफ्नो काम गर्यो फुर्सदको समयमा गीत संगीतलाई समय मिलायो यसरी नै बित्ने गर्छ ।
गीत संगीतको क्षेत्रमा सके सम्म यहि क्षेत्रमा लाग्ने कोसिस गर्ने छु । हेरौ कति सम्म समयले साथ दिन्छ । अन्तमा सम्पुर्ण मेरा दर्शक श्रोताहरुमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छस जसको कारण आज यो स्थानमा आइपुग्न सफल भएकी छु । उहाहरुकै माया साथ सपोर्ट र आशीर्वादको देन हो मेरा दर्शक श्रोता बिना जहिले पनि अपुरो र अधुरो नै रहनेछु ।
किसु गुरुङबारे थप जान्न click here